မောငျ(စှယျစုံကမျြး): March 2014
iPhone ကိုင်ထားသူများအတွက် အသုံးဝင်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ Reset ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်း
ios အကြောင်းနှင့်ပက်သက်၍ ကျနော်လေ့လာမိသလောက်မျှဝေခြင်း (၅)
iPhone တစ်လုံးအား Reset ပြုလုပ်ခြင်း
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သင့် iPhone ကိုတခြားတစ်ယောက်ယောက်ကိုရောင်းချင်တဲ့အခါ
App တွေ tweak တွေက အလုပ်ပုံမှန် မလုပ်ပဲ ဂေါက်ထနေမယ်
ဖုန်းကသုံးရတာ အရမ်းလေးလာမယ် စတဲ့
သင့်ဖုန်းကို reset ချပေးဘို့ လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်...
ဒါကြောင့် ဖုန်း Setting ကနေ Reset ချနည်းကို ဒီအပိုင်းမှာမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
သင့်ရဲ့  iPhone Setting>General>Reset ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အောက်ပါအတိုင်း
- Erase All Content and Settings
- Reset Keyboard Dictionary
- Reset Home Screen Layout
- Reset Location & Privacy ဆိုပြီး Reset ပြုလုပ်ပုံ ၆ မျိုးတွေ့ရမှာပါ။
ူ Setting ထဲမှာရှိတဲ့ WiFi, Bluetooth, Do No Disturb, Notifications,
General, Sounds, Wallpaper & Brightness, နှင့် Privacy စတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို
မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင် reset ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။
Setting ကိုသာ reset ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ဖုန်းအတွင်းရှိ Data & Media တွေဖြစ်တဲ့
သင့်ဖုန်း Setting အားကလိမိပြီး ပြန်မလုပ်တတ်ပဲပြသနာရှိလာပါက
နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေချင်ရင် Reset All Settings ဖြင့် reset ပြုလိုက်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ Reset All Settings ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုနှိပ်လိုက်ပါ ပုံထဲကလိုအနီရောင်စာသားနဲ့
တက်လာပါမယ် မစိုးရိမ်ပါနဲ့ သင်ကိုသေချာအောင်ထပ်မေးတာပါ Reset All Settings ကိုသာထပ်မံနှိပ်ပေးလိုက်ပါ..
ခဏစောင့်ပေးပါ Reboot လုပ်ပြီးပြန်တက်လာရင် Reset လုပ်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ။
ူ ဒီ Reset ကတော့အန္တရယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ reset မျိုးပါ
အထူးသတိပေးချင်တာကတော့ lock phone တွေကို Software Unlocked ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းများ
xxxx လုံးဝလုံးဝ မသုံးပါနှင့်။ xxxx
သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်းကို service ဆိုင်သို့ပို့ပြီး unlock ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကုန်များပါမယ်။
သင့်ဖုန်းက lock phone လား unlocked လားသိချင်ရင်
http://iphoneimei.info/ မှာ imei number ရေးပြီးကြည့်ပါ။
ဒီအကြောင်းကို အပိုင်း(၄)မှာ ကျနော်အကျဉ်းရေးထားပေးပါတယ်
မှတ်ချက်။ ။Reset မလုပ်မီ iCloud , iTunes ဖြင့် Backup မဖြစ်မနေလုပ်ထားပါ။
Erase All Content and Setting ကိုအသုံးပြုမယ်ဆို နှိပ်လိုက်ပါ အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုပဲ
သတိပေးစာသားပေါ်လာပါမယ် Erase iPhone ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
Reboot ကျပြီးပြန်တက်လာပါက Home Screen ကိုမြင်ရမည်မဟုတ်ပဲ Restore Mode ကိုသာမြင်တွေ့ရမှာပါ
iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး နောက်ဆုံး ios version ကို update လုပ်ပေးရပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ update လုပ်ပြီးမှသာ
Home Screen ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး
အသစ်တစ်လုံးကဲ့သို့ပြန်ဖြစ်စေတဲ့အတွက် သင်သာ BackUp မလုပ်ထားခဲ့လျှင် သင့်ရဲ့  Data & Media တွေကို
ဒီ reset ကတော့ ဖုန်းရဲ့  အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ wifi , network တွေကိုမူလနဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်
လုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။ ဒါကတော့ သိပ်ပြီးထွေထွေထူးထူးပေးစရာမှတ်ချက်မရှိပါဘူး ။
ဒီ reset ကိုတော့ Autocorrect feature ကိုသုံးတဲ့အခါ keyboard dictionary က
အမှန်ကိုမဖော်ပြတော့တဲ့အခါမျိုးဆိုသုံးလို့ရပါတယ် Autocorrect feature ဆိုတာက ကျနော်တို့ ကီးဘုတ်ကနေ
စာရိုက်လိုက်တဲ့အခါ စာလုံးသတ်ပုံမှားခဲ့ရင် custom dictionary ကအလိုလျောက်သိပြီး
အမှန်ဖြစ်နိုင်မဲ့စာလုံးကိုပြင်ပေးတာမျိုးပါ ကျနော်ကတော့ အာရုံနောက်လို့မသုံးပါဘူး ပိတ်ထားပါတယ်။
အဖွင့်ပိတ်လုပ်ချင်ရင် Settings>General>Keyboard> မှာ
Check Spelling စသည်တို့ကိုလိုအပ်သလို ပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရပါတယ်။
သင့်ဖုန်းကို စသုံးခါစမှာတော့ ဖုန်းမှာပါလာတဲ့ App တွေပဲရှိပါတယ်။
သင်လိုချင်တဲ့ App & Game တွေ ထည့်ပါများလာပြီး ဟိုရွေ့ ဒီရွေ့ လုပ်တော့ မူလရှိနေတဲ့ App တွေက
ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်နေမယ် အဲဒါကို သင်က မူလနေရာအတိုင်းပြန်ရှိစေချင်တယ်ဆိုရင်
ယခုဖော်ပြတဲ့ reset ကိုအသုံးပြုပြီး စေခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ Location နဲ့ Privacy setting ကို reset လုပ်ပစ်မှာပါ
ရလာမဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ Setting>Privacy ထဲကိုဝင်ကြည့်ပါ Location Services ပိတ်နေတာကိုတွေ့မှာပါ
Find My iPhone သည်လည်းပိတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ဖုန်းတည်နေရာကို ရှာမရနိုင်တော့ပါ။
ကလိချင်တာဖြစ်ဖြစ် စမ်းသပ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ် မိမိဖုန်းအား အရင်ဆုံး back up လုပ်ထားဘို့ မမေ့ပါနဲ့။
back up လုပ်မတတ်လျှင် အပိုင်း (၂) မှာကျနော်ရေးထားပေးပါတယ် အောက်ကလင့်ခ်နှိပ်ပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း (၃) မှာတော့ Jailbreak လုပ်နည်းကိုရေးထားပေးပါတယ် မဖတ်ရသေးဘူး ပြန်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ဒီအကြောင်းအရာများကို ကျနော်ဖတ်ဖူးလေ့လာဖူးသမျှထဲက ဥာဏ်မီသလောက်ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်း
ဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးမှသိတာမဟုတ်ပါဘူး ရှေ့ ကဆရာတွေရဲ့ နည်းလမ်းတွေကို
နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ကျနော့်ထက်တတ်ကျွမ်းသူများ ကျနော့်အမှားအား အကြံပေးမှုနှင့် ကျိုးကြောင်းမှန်ကန်ဝေဖန်မှုကို လေးစားစွာလက်ခံပါသည်။
Admin-Monster ( www.zwmnna.com )
Author Maungssk at 6:20:00 PM 1 မှတ်ချက်
Labels: i-Phone Reset ပြုလုပ်နည်း, i-Phone အခြေခံပညာများ
iPhone 5s ၀ယ်မည့်သူများ CDMA သို့ မဟုတ် GSM ရွေးတတ်စေရန်
iPhone 5s ၀ယ်တော့မယ်ဆို CDMA-GSM လား ရွေးဝယ်နိုင်ဖို့ အတွက်
မော်ဒယ်နံပတ်နဲ့ ခွဲပေးထားပါတယ် ။ မ၀ယ်ခင်မှာ ဖုန်းရဲ့နောက်ကျောကို
စစ်ကြည့်မယ်ဆို မော်ဒယ်နံပတ် ရေးပြထားပါတယ် ။ အသေးစိတ်ဖတ်ချင်
အောက်ကလင့်မှာ iPhone 5s အကြောင်း ရေးပြထားပါတယ်။
Author Maungssk at 6:35:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: i-Phone အခြေခံပညာများ
Iphone.Ipad တွေဝယ်တဲ့အခါ Apple ရဲ့ Originalပစ္စည်းအစစ်အမှန်ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးနည်း
Serial number နံပတ်ကိုရှာပီး အောက်ကလင့်မှာ စစ်ကြည့်ပါ
Setting- General - About - မှာ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
စစ်ကြည့်လို့ သူတို့ မှတ်တမ်းမှာ မရှိဘူးဆိုရင် အတုဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုတယ်
ဒီလင့်ကို နှိပ်ပြီး စစ်ပါ - Apple Product Checker
Author Maungssk at 6:00:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: i-Phone အတုအစစ် စစ်ဆေးနည်း, i-Phone အခြေခံပညာများ
ခပ်ရှုပ်ရှုပ် Animation Wallpaper ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုး - Facets Wallpaper v1.2.1 Apk
Android User တွေအတွက် ခပ်ဆန်းဆန်း Wallpaper တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Wallpaper ကတော့ ဘယ်လိုသရုပ်ဖော်ရမှန်းတောင်မသိဘူး တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ဗျာ။ Graphic Design တွေလိုလို Animation Design တွေလိုလိုနဲ့ မိုက်တယ်ဗျာ။ အောက်မှာ Screen Shot တွေ ကိုသာကြည့်လိုက်ပါ။ Android OS 3.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Author Pyae Phyo (MMiTD) at 12:42:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Phone အတွက် Wallpaper
အိုင်ဖုန်းကို ကြိုက်ကြသည့် အကြောင်းရင်း ( IPhone ကိုင်မလား Android ဖုန်းကိုင်မလား သိချင်သူများဖတ်ရန်)
အိုင်ဖုန်းဟာ ကမ္ဘာမှာ လူကြိုက်အများဆုံး စမတ်ဖုန်း အဖြစ် စံချိန်တင်ထား ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့ iPhone 5S ဟာလည်း လူကြိုက်များပြီး နောက်ထွက်မယ့် iPhone6ကိုလည်း မျော်လင့်နေကြ ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ iPhone ကို ဘာကြောင့် ကြိုက်ကြသလဲဆိုတာကို အကြမ်းဖျဉ်း အဖြေ ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါ အောက်ပါအတိုင်း ထွက်လာ ပါတယ်။
စတိုင် နဲ့ ဂုဏ် အရှိန်
အခြေခံဆုံး အချက် အနေနဲ့ စတိုင် ကို အရင်ကြည့်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည် က အချို့ ငွေရှိ အသက်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ် တွေတောင် i Device များကို ဝယ်သုံးပါတယ်။ သုံးတတ်လို့တော့ မဟုတ် ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ စတိုင် နဲ့ ဂုဏ် အရှိန် ကြောင့်မို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှ သပ်ရပ် လှပပြီး ဂုဏ်အရှိန် ကြီးတာ ကတော့ စတိဗ်ဂျော့ ကြောင့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး စမတ်ဖုန်းနဲ့ စမတ်ဖုန်း လောကကို ပြောင်းလဲသူ ဆိုပြီးတော့ ကြွေးကြော် ထားခြင်းပါ။ အမှန်တော့ စမတ်ဖုန်း လောကကို လမ်းစဖောက်ပေးတာ Apple တစ်ခုထဲ မဟုတ်ပဲ အခြား ကုမ္မဏီမျာလည်း ရှိနေပေမယ့် Apple ကိုပဲ ပိုမို လူသိ များခဲ့ ပါတယ်။
iPhone ရဲ့ အကြမ်းခံမှုက လူတိုင်း ပြောပါတယ်။ အကြောင်းက အလူမီနီယံ ကိုယ်ထည်ကြောင့်မို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် ကော်ဖုန်း တစ်လုံး ကျရင် ကွဲပေမယ့် အိုင်ဖုန်းက နောက်ကျောကော ရှေ့မျက်နှာပြင်ကော အတော်လေး အကြမ်းခံတာကို လေ့လာ မိပါတယ်။
မျက်နှာပြင် အရည်အသွေး ကောင်း
ဒါကလည်း အစဉ်ဆက် ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ အရည်အချင်း ဖြစ်ပါတယ်။ iPhone ရဲ့ ဖန်သား resolution ppi က ဟန်းဆက် အသီးသီး အသစ် ထွက်တဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် မှာ အမြဲတန်း ထိပ်ဆုံး ကနေ ဦးဆောင် ပါတယ်။ Retina Display တို့ကိုလည်း အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ဖုန်းတို့ အိုင်ပတ် တို့က ပျောက်သွားရင် Tracking လိုက်ဖို့ အတွက် အတော်လေး လွယ် ပါတယ်။ ပျောက်သွားတဲ့ အလုံးကို တစ်ဖက်က ဖွင့်လို့ အင်တာနက် သုံးပြီ ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့် ပျောက်နေတဲ့ အိုင်းဖုန်းဟာ ဘယ်နေရာ ရောက်နေသလဲ ဆိုတာကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူက ဓာတ်ပုံတွေ ဘာတွေရိုက်ရင် Could Storage နဲ့ Sync လုပ်ထားတဲ့အခါ ကိုင်ဆောင်ထားသူရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုတောင် အလွယ်တကူ ရနိုင် ပါတယ်။
အိုင်ဖုန်းရဲ့ Processor မြန်ဆန်ချက်က ဂိမ်းဆော့ရင် ပိုမို သိသာ ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Racing ဂိမ်းတွေမှာ ပိုမို သိသာ ပါတယ်။ Android စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးမှာ ဆော့တဲ့ Racing နဲ့ iPhone မှာ ဆော့တဲ့ Racing က မြန်ဆန်မှ သိသိသာသာ ကွာပါတယ်။ Processor ရဲ့ လည်ပတ်မှု မြန်ဆန်ပြီး ကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ ပေါင်းစပ် လိုက်တဲ့အခါ Gaming Device ကောင်း တစ်ခု ဖြစ်လာစေ ပါတယ်။
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် iPhone ပထမ မျိုးဆက်ကို ယနေ့တိုင် အသုံးပြုနေသေးတာကို အံ့သြဖွယ် တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone တို့လောက် မမြန်ပေမယ့် သူ့ဟာလေးနဲ့ သူ အလုပ်လုပ်နေတာကို တွေ့ ရတော့ iPhone ရဲ့ တာရှည်ခံ၊ အသုံးခံ မှုကို အံ့သြ ခဲ့ရ ပါတယ်။
အထက်ပါ အားသာချက်များပြင် အခြားသော အားသာချက်များလည်း ရှိပါ သေးတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ သူ့မှာလည်း အားနည်းချက် များစွာ ရှိပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ဈေးကြီးတာနဲ့ အသုံးပြုမယ့် App တွေကို ဝယ်သုံးရတာမျိုး၊ country region အရ အသုံးပြုဖို့ အဆင်မပြေသေးတာမျိုး၊ font ကိစ္စ အဆင်မပြေတာမျိုး၊ Jail Break လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ခေါင်းစား တာမျိုး အစရှိသဖြင့် အခက်လေးတွေ၊ အားနည်းချက်လေးတွေလည်း ရှိပါ သေးတယ်။ သို့သည့်တိုင် အိုင်ဖုန်းဟာ လူကြိုက် အများဆုံး၊ အလိုချင်ဆုံး စမတ်ဖုန်း တစ်လုံး အဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Author Maungssk at 8:48:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: i-Phone ၀ယ်မည့်သူဖတ်ရန်, i-Phone အခြေခံပညာများ
ios (iphone) နဲ့Android ဖုန်း ဘာကို သုံးသင့်သလဲ အခြေခံသဘောတရားများဖတ်နိုင်ပါပြီ
ios အကြောင်းနှင့်ပက်သက်၍ ကျနော်လေ့လာမိသလောက်မျှဝေခြင်း (၁)
ios နှင့် android အားနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
ios က android လောက် အသုံးပြုရတာ မလွယ်ကူပါ သို့သော် အရမ်းလည်း မခက်ပါ
ios ကိုစတင်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် Apple ကဖြန်ချီထားတဲ့ App တွေ Game ကိုရယူသုံးစွဲဘို့ နဲ့ Apple ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူဘို့ Apple ID account တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်
Android ဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲ Google account တစ်ခုလိုပါတယ်
ios လွယ်လွယ်ပြောရင် iPhone တစ်လုံးကိုအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးတော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သီချင်းတွေ ဗီဒီယိုတွေ ကို android မှာလို bluetooth နဲ့ Share ပေးလို့မရဘူး external memory လည်းမရှိတာကြောင့် ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး
Apple မှအခမဲ့ဖြန့်ဝေထားသော itunes ဖြင့်သာ music , video , game , app & ebook စသည်တို့ကို သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းဖြင့် App Store မှ download ဆွဲချရသော်လည်း မိမိမှာရှိသည့် မြန်မာသီချင်းများနှင့်ဗီဒီယို စာအုပ်များကို App Store တွင်ရှာမရနိုင်ပါ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှာရှိလို့ လိုချင်ရင်တောင် Bluetooth နဲ့ Share ပေးလို့လည်းမရတဲ့အတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ်လိုချင်တိုင်း ကွန်ပျူတာမှသာ သွင်းယူရမှာဖြစ်လို့
iPhone အသစ်တစ်လုံးကို သင်ဝယ်တဲ့အခါ ဖုန်းရဲ့ ဘာသာစကားစနစ်မှာ မြန်မာစာ မပါလာပါဘူး
ကျနော်တို့က မြန်မာစာရေးချင် ဖတ်ချင်တဲ့အခါ မြန်မာစာစနစ်ကိုထည့်သွင်းပေးဘို့ လိုအပ်လာပါတယ်
အဲဒီမြန်မာစာရေးလို့ရတဲ့ ကီးဘုတ်နဲ့ ဖောင့်ကို မြန်မာပရိုဂရမ်မာများက တီထွင်ပေးထားပါတယ်
ဒါပေမဲ့ Apple က ဒါကိုထည့်သုံးခွင့်မပေးထားပါဘူး ကျနော်တို့က သုံးချင်တယ်ဆိုတော့ Apple ရဲ့ စနစ်ကို စပြီးချိုးဖောက်ရပါပြီ
အဲလိုချိုးဖောက်တာကိုပဲ Jailbreak လုပ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်.. Android နဲ့ ယှဉ်ပြောရရင်တော့ Root လုပ်တာပေါ့ဗျာ...
အဲလို Jailbreak လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Android မှာ super user လိုမျိုး
ios မှာတော့ cydia ဆိုတာလေးရှိလာပါတယ်... အဲဒီ cydia ကိုအသုံးပြုပြီး ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့ ဖောင့်အပြင်
အခြားသော Apple ကခွင့်မပြုထားတဲ့ App & hacking game တွေကို သင့်ရဲ့  i device ထဲကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့ဖောင့်ထည့်နည်းကို နောက်ပိုင်းမှာ အဆင်ပြေသလိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်
ယနေ့အချိန်ထိ နိုင်ငံအများစုမှာ android စနစ်ကိုသာလူသုံးများနေပါသေးတယ်
အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်မှာ ios ဟာတန်ကြေးမြင့်နေတဲ့ဖုန်းဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း
android နဲ့စာရင် အသုံးပြုရ အနည်းငယ်ခက်ခဲနေတာက တစ်ကြောင်း
Application နှင့် ဂိမ်းများ android နဲ့စာရင် သုံးပုံတစ်ပုံလောက်သာရှိတဲ့အပြင် အခမဲ့ရယူနိုင်မှု android လောက်မပေါများတဲ့အတွက်တစ်ကြောင်း
မြန်မာပြည်သားအများစု အသုံးပြုနေတဲ့ မြန်မာ application နှင့် ဂိမ်းများ Android လောက် ios မှာမရှိခြင်းများနှင့်
လူတန်းစေ့ကိုင်နိုင်တဲ့ android ဖုန်းအသုံးပြုမှု များခြင်းဟာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပေ...
ios က တန်ကြေးမြင့်သလို ပေးတာနဲ့တန်အောင်ကို သုံးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ အသုံးပြုဖူးသူတိုင်း လက်ခံရမဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ
သူ့ရဲ့ အရည်အသွေးဟာ ဖုန်းလောကမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုငြင်းလို့မရအောင်ပါပဲ
ကျနော့်ရေးသားချက်များလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါတယ် ဒီအတွက်စာဖတ်သူများကိုတောင်းပန်ထားချင်ပါတယ်
ကျနော်က ios ကိုလေ့လာတာသိပ်မကြာသေးလို့ အမှားပါခဲ့ရင်နားလည်ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်
ကျနော့်ထက်တတ်ကျွမ်းသူများ ကျနော့်အမှားအား အကြံပေးမှုနှင့် ကျိုးကြောင်းမှန်ကန်ဝေဖန်မှုကို လေးစားစွာလက်ခံပါသည်။
Author Maungssk at 6:54:00 PM0မှတ်ချက်
ရာသီဥတုရဲ့လှပမှုရှုပုံရိပ်လေးကိုဖော်ပြပေးတဲ့ - DreamSky Pro Live Wallpaper v1.02 APK
အခုတစ်လော Live Wallpaper လှလှလေးတွေရထားတော့ အဲဒါလေးတွေကိုပဲ ရွေးပြီးတင်ပေးနေဖြစ်ပါ တယ်။ အခုလည်း သဘာဝတရားရဲ့ ရာသီဥတုအလိုက်ဖြစ်ပေါ်တက်တဲ့ ပုံရိပ်လေးကိုဖော်ပြပေးတဲ့ Live Wallpaper အလန်းလေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ နမူနာကြည့်နိုင်ဖို့အောက်မှာ Screen Shot လေး တင်ပေးထားပါတယ်။ အခု Application လေးကတော့ ရုပ်ထွက်အတော်လေးကြည်လင်ပြက်သားမှုရှိသလို ဘဲ နည်းနည်းလေးမြင့်ပါတယ်။ Android OS 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာသာအသုံးပြုနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Author Pyae Phyo (MMiTD) at 11:44:00 PM2မှတ်ချက်
PowerISO v5.9 ,13.03.2014, 64bit/32bit Full Version (CD/DVD အခွေ Burn ဖို့ အလွယ်ဆုံးဆောဝဲလေးပါ)
PowerISO ဆောဝဲလေးကတော့ အခွေ Burn ဖို့ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ မိမိ သိမ်းချင်တဲ့ Data ဖိုင်တွေကို PowerISO ဆောဝဲလေးနဲ့ CD/DVD အခွေ ထဲ Burn ပြီး သိမ်းဆည်းထားလို့ ရပါတယ်။ ထို့အပြင် MP3/AVI/ISO/MPEG/MP4 အစရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို DVD အခွေထဲ Burn လို့ရပါတယ်။ သုံးရတာလည်းအရမ်းကိုလွယ်ကူပါတယ်။
ISO ဖိုင်တွေကို Extract လုပ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ အခြား Data ဖိုင်တွေကိုလည်း ISO ဖိုင်အဖြစ် Archive လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ထို့အပြင် ISO ဖိုင်များကို CD/DVD/USB Stick များမှာ Bootable Image အဖြစ် Burn နိုင်သောကြောင့် လူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
Full သုံးလို့ရအောင် Keygan ပါ တင်ပေးထားပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ် ကို Install ပြးတာနဲ့ Keygan က Name နဲ့ Serial ကို Copy လိုက်ရင် Activated အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Download PowerISO v5.9
Google Drive, Zippyshare
Author Zaw Min Than at 2:25:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: VCD-DVD-Burning ဆော့ဝဲများ
မော်လမြိုင် (သို့မဟုတ်) ရင်ဘတ်ထဲကမြို့ပြ
Credit with Respect bro - သားကြီး
shared အာမီ ရမ်'s photo.
Author Maungssk at 6:46:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: ရင်ထဲထိတဲ့ သူတို့ ကဗျာ
USB Drive/Pen Driveကိုအသုံးပြုပြီး Windows7ကိုအရှိန်မြှင့်တင်နည်း
USB Drive/Pen Driveကိုအသုံးပြုပြီး Windows7ကိုအရှိန်မြှင့်တင်နည်းစာအုပ်ကလေးပါအောက်မှာ PDF ဖိုင်လေးကိုဒေါင်းယူပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ် DownLoad Link 1
ပိုတိုရှော့ပုံများနှင့်နည်းပညာများကိုတိုက်ရိုက်ရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာFB LIKE နှိပ်လိုက်ခဲ့ပါနော် ၃စက္ကန့်အတွင်းကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကနေ သင့်ဆီကိုအရောက်ပို့လာမည်။ ကျွန်တော်ပိုင်သောဆိုဒ်ကလေးကိုလည်းလာလည်စေချင်ပါတယ် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်သူငယ်ချင်းတို့ကို အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ Photoshop &Techniques ဒေါင်းနည်းများမသိပါက ဒီမှာနှိပ်ပြီး သွားကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ
Author Unknown at 10:04:00 PM0မှတ်ချက်
ချစ်သူ မူပိုင်ရှိသူများ နှင့် မူပိုင်ကို ချစ်တဲ့သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်း-2
ဒီနည်းလေးကို ဘာလို့ ဒီလိုပေးရလည်းဆိုတော့ ချစ်သူတွေရဲ့ဖုန်းထဲကို သီချင်းသွင်း
အကူညီပေးတဲ့အခါနဲ့အထူးအဆန်းလေးတွေ လုပ်ချင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်လို့ 
ပေးချင်းဖြစ်ပါတယ် အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုမကရပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ချစ်သူတွေရဲ့
ဖုန်းထဲကို သီချင်းမထည့်ခင်မှာ အပေါ်မှာပြထားသလို ကာဗာပုံလေးတွေ ထည့်ပေး
ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုဒ်လိပ်စာလေးတွေရေး အမှတ်တရ လုပ်ပေးလို့ ရတယ် ။ ဖုန်းထဲမှာ
သီချင်း ဖွင့်တဲ့အခါ ကိုယ်ထည့်ပေးတဲ့ ပုံလေးတွေ ပေါ်နေပါတယ် အဲ့သီချင်လေးက
တခြား ဖုန်းထဲကို ထည့်ရင်လည်း ပါသွားပါတယ် နောက် ၀က်ဆိုဒ်ပေါ်ကိုတင်လည်း
ပါသွားမှာပါ ။ သီချင်းကို မူပိုင်ပုံနဲ့ ပြင်ချင်တဲ့အခါ သုံးလို့ ရပါတယ်။ အဆင်ပြေသလို
အသုံးပြုကြည့်ပါ ။ ဒါကြောင့် မူပိုင်ချစ်သူတွေ အဆင်ပြေစွာ ဖလမ်းဖလမ်း ဖြစ်ပါစေ
အခုနည်းက ဖုန်းထဲကနေ လုပ်ရတာပါ အောက်ကဆော့ဝဲလေး ယူထည့်ပီးလုပ်ပါ
Download ( Zippyshare ) = itag Music Cover Changer And Copyright
Download ( Mediafire ) = itag Music Cover Changer And Copyright
ကွန်ပျုတာက ပြုလုပ်နည်းဖတ်ချင်ရင် -www.zwmnna.com -co-2
Author Anonymous at 9:40:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ, Useful Apk
အဝေးရောက်သူတွေ Google Earth ဖြင့် ကိုယ့်အိမ်ကို ပြန်ကြည့်နည်း
ဒီစနစ်ကို အဝေးရောက်မြန်မာပြည်သားတွေ သုံးလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ် ဘာလို့ လဲ
ဒီဆော့ဝဲထည့်ထားရင် မြန်မာပြည်က ကိုယ်နေတဲ့ နေရာတွေ အိမ်တွေ လမ်းတွေ
ကျောင်းတွေ ဘုရားတွေကို အလွမ်းပြေ အသေးစိတ် ကြည့်လို့ရနေတာကြောင့်ပါ
လိပ်စာတစ်ခုခု ကားမောင်းမယ့်လမ်းကြောင်း တစ်ခုခုဆိုရင် ကျနော်တို့ မန်နေဂျာ
၀န်ထမ်းတွေလည်း သုံးကြတယ် အတော်လေး အဆင်ပြေကောင်းမွန်ပီး ရှိသင့်တဲ့
ဆော့ဝဲတစ်ခုပါ ။ ကျနော်တော့ ရွာလွမ်းရင် ဒီဟာလေးနဲ့ ကြည့်တယ် ။ ရွာထိပ်မှာ
ဂျပန်ခေတ်ထဲက ရှိတဲ့ မန်ကျည်းပင်အကြီးကြီးရှိတယ်။ နွားကျောင်းရင် ဖဲရိုက်တဲ့
နေရာတွေပေါ့ဗျာ..အဲ့နေရာပါ။ သေချာကြည့်လို့ ရတယ် ။ ပုံတော့ မပြတော့ပါဘူး
တော်ကြာ မကျေနပ်သူတွေက ဗုံးလာကျဲမစိုးလို့ ။ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေ
အလွမ်းပြေ ရိုက်ပြလိုက်ပါတယ်၊ အဝေးရောက်သူတွေ မသုံးရသေးရင် သုံးကြည့်
ရွာက စာဥ ဘယ်အခြေနေရှိလဲ ပြန်ကြည့်လို့ ရတာပေါ့နော..............................။
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - www.ziddu.com/GoogleEarthPro7
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - http://www.google.com/earth/
အထက်က နှစ်ခုမှာ ziddu ကတင်တာ Pro version ပါ Free ထက်ကောင်းတယ်
အောက်တစ်ခုက အလကားရပါတယ် အထက်တစ်ခုလောက် Feature မစုံဘူး
အပေါ်တစ်ခုယူမယ်ဆို Anti virus ပိတ်ထားနော်..Path ဖိုင်ပါနေလို့ ...သတိ....။
Author Anonymous at 8:32:00 PM7မှတ်ချက်
face book & Advanced Download Manager Android App
Android ဖုန်းတွေ မှာ facebook Update တတ်သွားလို့video ဖိုင်တွေ ကို download မရဘူးဆိုရင်
လက်ရှိ သုံနေတဲ့facebook အသစ်ကို ဖျတ်ပြီး အခု တင် ထား တဲ့facebook အဟောင်း လေးကို ပြန်ထည့်ပြီး အသုံးပြုနိုင် ပါ တယ်။
facebook အဟောင်း ကို ပြန်ယူချင်ရင် ဒီနားမှာ နော်...facebook အဟောင်းလေး
တစ်ဆက်တည်း ပဲ Advanced Download Manager Android App ကိုပါထည့် ပေးလိုက်မယ် နော်
facebook & Advanced Download Manager Android App ကို ပါ ယူပြီး ...
သုံးကြည့်ပါ ...သူငယ်ချင်း ရဲ့ဖုန်း မှာ လို ချင်တဲ့video လေးတွေကို အလွယ်တကူ ရ ပါ လိမ့် မယ်....
ADM video download ကို ဒီနားမှာ ထပ်ယူနော်... Advanced Download Manager Android App
သူချင်းအားလုံးအဆင်ပြေ ပြေ နဲ့သုံးနိုင် ကြပါစေဗျာ.....
Author လမင်းချစ်သူ at 3:47:00 AM0မှတ်ချက်
Labels: Android ဖုန်းအတွက် download
Window XP Mod Launcher (for andriod phone)
andriod ဖုန်းဆောဝဲ တွေ တမျိုးပြီးတမျိုး သစ်ဆန်းလာသည်နှင့် တပြိုင်နက် Window XP Mod Launcher လေးလည်း andriod ဖုန်းတွေအတွက် လာပါပြီဗျာ။ အခုလက်ရှိပုံစံလေးကိုသုံးရတာရိုးနေပြီ ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် Window XP ပုံစံ luancher လေးတွေ့တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဖုန်းလေးက ဖလန်းဖလန်းဖြစ်သွား မှာသေချာပဲ window XP အသံလေးပါ ဖုန်းဖွင့်ရင်မြည်လာတာဗျ ကျနော်တော့ ကြိုက်သွားတယ်။ လက်ရှိလည်းသုံးနေပါတယ်။ window xp ပံစံလေးသုံးရတာပေါ့...။
လိုချင်သော သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာစိတ် ကြိုက်ဒေါင်းနိုင်ပါပြီဗျာ.....။
>>>>>Download Window XP Mod Launcher.apk<<<<<
Window XP Mod Launcher screenshot
Author Zaw Min Than at 3:16:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Android အလန်းဇယား Launcher
အခု တင်ပေး လိုက် တဲ့mobo gine ဆော့ ၀ဲ လေးကတော့တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေလည်း သိပြီးသား ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်
ဒါ ပေမယ့် မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေအတွက် ထပ်ပြီးတင်ပေး လိုက်ပါတယ်.
ဒီဆော့ ဝဲ လေး ရဲ့ အားသာ ချက်ကတော့Computer နဲ့သုံးတဲ့ သူတွေ အတွက် အသုံး ၀င် ပါ တယ်
android apk တွေကို Computer နဲ့download လုပ် ယူ လို့ရ ပါ တယ် ...
ပြီး တော့ဖုန်း နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး လည်း သုံး နိုင် ပါ တယ်...
download လုပ် ယူပြီးသား android apk တွေ ကို သိမ်းချင်ရင် လည်း အဆင်ပြေ ပြီး ဖုန်းထဲ ကိုလည်းရွေ့ သုံးလို့ ရပါတယ်
ဆော့ ၀ဲ လုပ် ပုံ လုပ် နည်းလေးကတော့ သိပ် ပြီးမခက် ပါဘူး ရိုးရိုး install လုပ် ပေးလိုက် ရင် ရပါ ပြီ ပြီးရင် download ယူထား တဲ့ apk ဖိုင် တွေ ကို apk -shortcup ဖိုင် လေးထဲ မှာ ပြန်ယူလို့ရပါ တယ်...တကယ်လို့သူငယ်ချင်းတို့ သုံးကြည့် ချင်ရင် ဒီမှာနော်....MOBO genie အဆင်ပြေစွာ နဲ့သုံးနိုင်ကြပါစေ ဗျာ......
Author လမင်းချစ်သူ at 12:49:00 AM0မှတ်ချက်
အောက်ကဘောက်လေးထဲမှာလိုအပ်တာလေးတွေ ဖြည်.ပြီး ကိုယ် ၀က်ဆိုဒ်နဲသင်တော်တဲနေရာမှာထည့်ပေးရုံပဲနော်
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 8:33:00 PM0မှတ်ချက်
ဒီဇိုင်းလှလှလေးသုံးဖို့Cherry Player ( Youtube ကို တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်)
ဒီဟာလေးကတော့ ကွန်ပျုတာထဲမှာ ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးနဲ့ သုံးချင်ရင် သုံးနိုင်စေဖို့Player
တစ်မျိုးပါ ။ အားကစားသတင်းတွေ youtube မှာတင်တဲ့ သီချင်းတွေ ၊ Videoတွေ
ဒီ Player လေးကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ ရပါတယ် အသစ်ဆန်းသုံးသူများအတွက်
Version 1.2.7 · Windows · 20.7 Mb
CherryPlayer will play YouTube videos directly or save videos to your hard-drive for later playback. Now you can download all of your favorite YouTube videos directly to your computer simply by using CherryPlayer. CherryPlayer has all required features to work both asacomplete YouTube player andaYouTube downloader!
CherryPlayer is integrated with VK.com and offer instant playback of all millions of MP3 songs in the VK archive. All is available fromabuilt in search engine!
CherryPlayer works directly against Last.fm to bring you the most popular artist and songs on the internet at this very moment. Just pick your favourite song and play.
Create playlists to organize your media, drag & drop files directly to CherryPlayer, click and play! CherryPlayer was designed with one focus - you! Every inch of this player has been thought through to give you the best possible user experience.
All files work!
CherryPlayer supportsawide range of formats out-of-the-box. No need of having to install additional codecs or other worries that may destroy your evening. CherryPlayer can play all your movies and all your music files! If you experience any problems, we will quickly resolve any problems.
Plays all formats - avi, mpg, vob, ifo, mkv, webm, mp4, hdmov, mov, 3gp, 3g2, flv, f4v, ogm, rm, wmv, wmp, asf, dat, divx, aac, aif, au, caf, flac, m4a, mp3, ogg, ra, wav, wma, wv and more
Author Anonymous at 10:52:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Computer အတွက် Player စုံ
ကျွန်တော်ဒီတခါတင်ပေးမှာကတော့သူငယ်ချင်း WinRar မှာပါတ်စဝပ်ခံထားပြီးမေ့သွားခဲရင် ပါတ်စဝပ်ပြန်ယူလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုပါပဲ။ ဖူးဘားရှင်းလေးဖြစ်လို့အမြဲသုံးနိုင်ပါတယ်။WinRar ပါတ်စဝပ်မေ့သွားသူများ ကိုယ့်ပါတစ်ဝပ်ကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆော့ဝဲလေးကိုဒေါင်းယူပြီးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်
အဆင်မပြေခဲ့တာများရှိခဲ့ရင် CBOX တွင်ပြောကြာခဲ့ပါနော် ပိုတိုရှော့ပုံများနှင့်နည်းပညာများကိုတိုက်ရိုက်ရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာFB LIKE နှိပ်လိုက်ခဲ့ပါနော် ၃စက္ကန့်အတွင်းကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကနေ သင့်ဆီကိုအရောက်ပို့လာမည်။ ကျွန်တော်ပိုင်သောဆိုဒ်များသို့လာလည်နိုင်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်လျှက်ပါ Photoshop &Techniques Full Version Software Android ဒေါင်းနည်းများမသိပါက ဒီမှာနှိပ်ပြီး သွားကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ
Author Unknown at 7:26:00 AM0မှတ်ချက်
Labels: Computer အတွက် Recovery ဆော့ဝဲ
DVD-Cloner 2014 11.30 Build 1304 + Activator Full Version Size 12MB
DVD-Cloner 2014လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ Dvd အခွေတွေကိုကူချင်သူများအတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 12MBပဲရှိပါတယ်။ဒီဆော့ဝဲလေးရဲ့အကြောင်းစုံကိုအောက်မှာလေ့လာရင်းဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်
DVD-Cloner 2014 is excellent DVD/Blu-ray copy software that makes quality DVD/Blu-ray backups super easily. It provides you easy-to-use tools and state-of-the-art technology
that let you make quality DVD/Blu-ray copies. DVD-Cloner 2014 is the up-to-the-minute generation of the top DVD copy software worldwide. Its flexible functions and the most advanced technology bring youabrand-new DVD/Blu-ray copying experience. DVD-Cloner 2014 also isapowerful DVD copying/ burning/ decrypting tool with its diverse customized copy modes, no matter full disc copy or main movie copy. With new movies and related never-ending changes and improvements springing up, DVD-Cloner 2014 is equipped with brand-new UMT to copy latest DVD movies.
DVD-Cloner 2014 enables you to make full DVD disc copy, main movie copy or customized copy, save/skip DVD menus and makeachoice from different subtitles and audio track of different languages to satisfy everyone all over the world.
Under the customized DVD copy mode, you can select to copy your desired chapters toaDVD-5 or DVD-9 disc. Meanwhile, DVD-Cloner 2014 can copy encrypted Blu-ray movies without any third party plug-in. With the optimized DVD reading speed, it will be finished just afteracup of coffee to makeaDVD copy.
• Removes all known DVD protections such as Macrovision, AACS, CPPM, RC, RCE, APS, UOPs and RipGuard for you to bring the cinema home.
• The fire-new guided and wizard interfaces make DVD copy more convenient.
• Copies DVD-5 to DVD-5, DVD-9 to DVD-9 in 1:1 ratio.
• Burns the exact contents of DVD movie folders, ISO files or data files from the hard disk toablank DVD disc.
• Makes DVD copy block by block, whether data DVDs or music DVDs.
• Copies only the main movie fromaDVD movie toaDVD-5, omitting the menus and special features.
• Select audio tracks and subtitles of different languages to copy.
• Extracts only audio files from the DVD movie.
• Supports for reading the movies of DVD format from the hard disk under the “Combine multiple DVDs to one DVD±R DL or BD-R/RE” copy mode.
• Combines up to6DVDs to one BD-R/RE to save your DVD discs.
• Compresses one DVD-9 movie onto one DVD-5 disc with no quality loss.
• Select multiple chapters ofaDVD movie to copy and preview the movie contents with the built-in player.
• Select to keep or remove menus when splittingaDVD-9 to two DVD-5 discs.
• Makes multiple DVD copies without having to repeat the entire process again.
• Define the compression rate to save your valuable disc space and preview the real-time picture quality.
• Under the customized DVD copy mode, you can select to copy your desired chapters toaDVD-5 or DVD-9 disc.
• Copies DVD discs to DVD folders or ISO files on the hard disk.
• Copies 3D DVD movies.
• Copies DVD movies to the flash drive.
• The inventive UMT (Upgraded Module Technology) enables you to copy latest DVD movies through the optimized module.
• DVD-Cloner 2013 provides you the freedom to copy Blu-ray movies to the hard disk without any third party plug-in and watch them with Blu-ray player software without an HDCP-compliant graphics card or HDCP-compliant monitor. No need to buy expensive devices.
DVD-Cloner 2014 Other features:
• Supports for multi-core CPUs and makes the DVD copy much faster.
• Downloads and captures online movies from the Internet with the free bonus Stream-Cloner Lite. If you want to convert the downloaded or captured movies to various video and audio formats for enjoying on popular media devices, please upgrade it to Stream-Cloner to enjoy more functions brought by the all-in-one stream downloader!
• Converts DVD movies to AVI, MPEG and SVCD output formats with the free bonus Open DVD Ripper3Lite. If you want to rip DVD movies to more video and audio formats as well as convert 2D movies to 3D format, please upgrade to Open DVD ripper 3
• Automatically identifies the source movie and the target burner after the disc is put into the drive.
• Displays the wizard titles on the Expert interface.
• Select to delete the temporary files when the copy is finished.
• Adjusts the screen ratio (such as 4:3, 16:9) to fit your screen size.
• Controls the DVD reading speed intelligently to get less noise when previewing DVD movies.
• Supports all dual-layer/single-layer/Blu-ray discs and burners.
• Friendly multi-lingual interface, including English, French, Spanish, Dutch, Greek, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Arabic, etc.
• Exports DVD-Cloner log file automatically.
OS: Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP and 2000.
– Optimized the format conversion function between DVD movies and ISO files.
– Supports more DVD movies.
IF YOU LIKE THIS PROGRAM, SUPPORT DEVELOPERS, BUY IT!
HomePage - http://www.opencloner.com
Author Unknown at 1:18:00 PM0မှတ်ချက်
VA - ပတ္တမြား FM - Radio to Live (2014) [Album]MP3-128Kbps
၀၁ ပတ္တမြားသုခအလင်္ကာ - သားဒီးလူ၊ Jewel
၀၂ ချစ်သောမောင်မောင် - အိမ့်ချစ်
၀၃ ချစ်သတိပြု - ရဲ့ရင့်အောင်
၀၄ အင်းလေးမှာရွာတဲ့မိုး - နီနီခင်ဇော်
၀၅ မင်းတစ်ယောက်တော့အသည်းကွဲရလိမ့်မယ် - စည်သူလွင်
၀၆ မနှောမြေမှတေးသံသာ - ဂျက်ဆန်ထွန်း၊ မရန်ဆိုင်းနော်
၀၇ မောင့်ကိုချစ်ဖို့မွေးဖွားလာပါတယ် - နေနေ
၀၈ ချစ်ချစ် - သားသား
၀၉ ချစ်တယ် - ချမ်းချမ်း
၁၀ ညမွှေးပန်း - Ar-T
၁၁ ပန်ပေးပါရစေ စံပယ်တစ်ကုံး - Lလွန်းဝါ
၁၂ စိမ်းတယ်လို့မှတ်မှာလား - အေသင်ချိုဆွေ
၁၃ မပြိုသည့်မိုး - ထူးအယ်လင်း
၁၄ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် - အိမ့်ချစ်၊ နီနီခင်ဇော်၊ နေနေ
VA - ပတ္တမြား FM - Radio to Live (2014) [Album]MP3-128Kbps [ 58MB] Download Whole Album>>> Music All Channel Music All Channel
Author Unknown at 1:17:00 PM0မှတ်ချက်
TeamViewer Corporate 9.0.26297 + Patch - 5.65 Mb
TeamViewer ဆိုရင်လူတိုင်းသိပြီးသာပါပဲ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှစ်တစ်လုံး အင်တာနက်လိုင်းကောင်းရင်လှမ်းပြင်ပေးလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါပဲ။နောက်ထွက်လာတာဖြစ်ပြီး ဖူးဘာရှင်းအတွက် Patch ထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 5MBလောက်ပဲရှိပါတယ်ဗျာ။ကဲအောက်မှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်
Read more at http://thepiratebay-th.blogspot.com/2014/03/teamviewer-corporate-9026297-patch-565.html#qTsqzeKiT7HtXVHl.99
Author Unknown at 7:32:00 AM0မှတ်ချက်
Labels: Team Viewer
လူပျို မှတ်စု ( ၁ )
ဒါပေမယ့် .. သနပ်ခါးမလေးတွေကို ရွေးတယ်
ဒါပေမယ့် .. ဆံကျစ်ကလေးတွေဆို ငြိတယ်
sexy လေးတွေကို တပ်မက်တယ်
ဒါပေမယ့် .. အိနြေ္ဒရှင်လေးကိုပဲ လက်ထပ်တယ်
အတို အဟိုက်လေးတွေဆို မျက်ဝန်းမှာ ဝဲနေတယ်
ဒါပေမယ့် .. ရင်ဖုံး လုံချည် လေးတွေပဲ ရင်တွင်းမှာ စွဲစေတယ်
လရောင်အောက်က ချစ်သူဆို မက်မဆုံး ကြည်နူးတယ်
ဒါပေမယ့် .. နေရောင်အောက်က ချစ်သူကိုပဲ တစ်သက်လုံး ရည်စူးတယ်
၃ နှစ် ၃ မိုးခေတ် မဟုတ်တော့လို့
၃ ရက် ၃ မိနစ် အချစ်ကို ကြည်နူးတယ်
ဒါပေမယ့် စံပယ်တွေ လွယ်လွယ်ပွင့်ရင်
မင့် ဘယ်လောက်ပဲ ဖလန်းဖလန်း ထထ
လူပျိုတွေ တမ်းတမ်းတတ စာရင်းထဲတော့
မင်း ... မပါဘူး !
နွေဦးမောင်မောင်( မန်း )
Author Maungssk at 11:25:00 PM0မှတ်ချက်
Photoshop နဲ့ဒီဇိုင်းပညာကို စိတ်ဝင်စားသူအတွက် ဆော့ဝဲကောင်းတစ်ခုပါ
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ဓာတ်ပုံပြုပြင်တာ ဒီဇိုင်းထွင်တာ စာလုံးအလှရေးတာ တွေကို
၀ါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပါတယ်။ မရှိမဖြစ် မဟုတ်တောင် ရှိထား
ယူထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲတစ်ခုပါ။ ဒီဇိုင်းပြုပြင်ပေါင်းစပ် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အရမ်းလှ
အရမ်းမိုက်တယ် Photoshop လိုပဲ ပြုပြင်ဖို့အတော်စုံလင်ပါတယ် ပုံတွေအများကြီး
သတင်းစာမျက်နှာလို လုပ်ချင်ရင်လည်းရတယ် အဓိကပါဝင်တာက ဓာတ်ပုံကို ပြင်ဖို့ 
ချယ်သဖို့ ထက် ဒီဇိုင်းအတွက် ပိုပြီး အသားပေးတယ်ထင်ရပါတယ် အဲ့ကြောင့် ဒီဇိုင်း
စိတ်ဝင်စားသူများ ယူနိုင်ပါပြီ ။ ဒီဆော့ဝဲက အခုမှစသုံးတာမလို့စမ်းကြည့်နေဆဲပါ
ကျနော်တင်တဲ့လင့်က Download ယူချင်ရင် - Photo Impact ( Design)
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - Photo Impact ( Design )
Author Anonymous at 10:57:00 PM4မှတ်ချက်
Labels: Computer ထဲမှာရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ, အလန်းဇယား PhotoShop ဒီဇိုင်း
ကွန်ပျူတာကိုမြန်ဆန်သွက်လက်စေဖို့ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့ရှင်းကြည့် သွက်လာမယ်
ဒီတစ်ခါ တင်ပေးတဲ့ဆော့ဝဲ ကတော့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အမှား
တွေကို အလိုလို ပြုပြင်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ ။ ဆော့ဝဲပေါင်း များစွာထဲမှာမှ
ကောင်းနိုးနိုးရာရာများကိုသာ စမ်းသပ်အသုံးပြုတင်ပေးနေတာပါ ။ ကွန်ပျုတာ
ခဏခဏ ကလိတတ်သူတွေ အတွက် အရမ်းသင့်တော်ပါတယ်.................။
ဒီမှာ Download Error Repair Professinal full version ( zip-share )
ဒီမှာ Download Error Repair Professinal full version ( ZIDDU )
Author Anonymous at 10:41:00 PM 32 မှတ်ချက်
Labels: Computer Cleaner ဆော့ဝဲများ, Computer ထဲမှာရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ, Computerလေးနေတာကိုမြန်ချင်ရင်
DISNEY ရဲ အအောင်မြင်ဆုံး ကာတွန်း
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 10:12:00 AM0မှတ်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးပေါ်ဖုန်းနံပတ်တွေ အရေးပါတဲ့ ဖုန်းနံပတ်တွေ စုစည်းထားတဲ့ APK
ဒီဆော့ဝဲလေး ဖုန်းထဲရှိရင် မှတ်စု ထုတ်ကြည့်စရာမလိုပဲ အရေးအကြောင်းရှိရင်
ချက်ချင်း ဆက်လို့ ရပါတယ် ။ အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ဖုန်းတွေလည်းပါတယ်
အသုံးပြုလိုသူ မသုံးရသေးသူ အောက်ကလင့်မှာ Download ယူထည့်လိုက်ပါ
Download - Myanmar.Hotlines.
Facebook နည်းပညာစာအုပ် (5)
Miscrosof Office ဆိုင်ရာစာအုပ် (6)
Networking ဆိုင်ရာစာအုပ် (22)
Photoshop ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (23)
Programming ပညာရပ်များ (14)
ချက်ပြုတ်နည်း နဲ့ မုန့် လုပ်နည်း (6)
နည်းပညာ စာအုပ်များ (83)
ရုပ်သံ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နည်းစာအုပ် (6)
သမိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (7)
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) လမ်းညွှန် (8)
Andriod Error Solution (2)
Android Application (631)
Android Camera APK (41)
Android Game (207)
Android phone နှင့်Computer Internet ချိ်တ်နည်း (5)
Android Root (12)
Android Theme (29)
android wallpaper (14)
Android Weather (1)
Android နည်းပညာများ (21)
Android ဖုန်း Video Editor (9)
Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (180)
Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (135)
Android ဖုန်းအတွက် Reader (3)
Android အလန်းဇယား Launcher (46)
Backup APK (7)
Funny Talk apk (2)
iphone နဲ့ ဆိုင်သော (59)
Mobile Browser (3)
Mobile Chating and Video Call (25)
Mobile Guide Journal (30)
Phone Battery ပြဿနာ (6)
Phone ကနေ Download ယူနည်း (11)
Phone နဲ့ သက်ဆိုင်သော (34)
Phone အတွက် Cleaner (13)
Phone အတွက် Facebook (4)
Phone အတွက် Wallpaper (12)
Phone အတွက် လုံခြုံရေးဆော့ဝဲ (3)
Phone အတွက် မြန်မာလိုဆော့ဝဲ (4)
Phone အတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန် (5)
Phone အတွက်မြန်မာဖောင့် (14)
Phone အတွက်မြန်မာပြက္ခဒိန် (2)
Phone အလန်းဇယား Rington (7)
Root လုပ်နည်း (1)
Screen Recoder (8)
Uninstaller for Phone (2)
Youtube မှ Download ယူနည်း (12)
ဓာတ်ပုံပေါ် မြန်မာစာရေးချင်ရင် (1)
ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျုတာ Wifi ချိတ်နည်း (2)
Author Maungssk at 10:59:00 PM0မှတ်ချက်
မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး နှင့် နတ်သား စကားပြော MP3 file ( 1951 )
မင်္ဂလာပါ........ဒီလိုဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိခဲ့ဖူးပါတယ်......။( ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက အဘိုး၊အဖွားတို့ ဖွင့်တာ ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်....။နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။...
Facebook ပေါ်တွင် Block လုပ်ထားသူကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် ပြန်ပြီး Add တတ်ချင်ရင်
ဒီနည်းကတော့ လူတစ်ယောက်ကို ဘလော့တဲ့နည်းနဲ့ ပြန်ဖွင့်တဲ့နည်းပါ သူငယ်ချင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ ဘလော့ထားလိုက်ပ...
Facebook မသုံးချင်တော့၍ အကောင့်ကို အပြီးဖျက်နည်းနဲ့ခေတ္တခဏ ပိတ်ထားနည်း
ဒီနည်းလေးကတော့ အကောင့်ကို မသုံးချင်တော့၍ ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလေး ကိုလုပ်ကြည့်ပါ အခုတလော အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖွဘုတ်ခေါ်Fa...
Phone ထဲကနေ ဓာတ်ပုံနဲ့ သီချင်းတွဲ၍ Slideshow MP4 ပြုလုပ်နည်း
ဆော့ဝဲကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့License Ageeement ပေါ်လာမယ် Decline နှိပ် နောက်တစ်ကွက် Login Facebook မှာ NO,i don`t like sharing နှိ...